☆ I-Sandy Hill Apartment #1 Indawo Yokudlala ☆ Ipuli kunye neNetflix ☆ - I-Airbnb
☆ I-Sandy Hill Apartment #1 Indawo Yokudlala ☆ Ipuli kunye neNetflix ☆
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguReady Set Host
• Kwigumbi lokulala eliyi-1, iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-1 enebhalkhoni yabucala.
• I-WIFI yasimahla kunye neNetflix.
• Umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla.
• Iphuli, Ijimu kunye neSauna!
• Kulala abantu abayi-4.
• Kufuphi nolwandle, iSouthland Shopping Centre, iivenkile zeSandringham kunye nesikhululo setreyini.
Ubhukisha indawo yokuhlala yeqela? Sineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-4 ezifumanekayo kwesi sakhiwo. Buza ukuze ufumane okungakumbi!
Yonwabela le flethi okanye indlu ekwicomplex, ekufutshane neevenkile, iindawo zokutyela, iSouthland Shopping Centre, ulwandle kunye neevenkile zeSandringham.
Pheka isaqhwithi kwikhitshi lakho elinento yonke, okanye uhlale nje ubukele imuvi kwi-TV enkulu.
Ngaba uceba ukuya kwisidlo sangokuhlwa? Bhukisha itafile nakweyiphi na iivenkile zokutyela ezintle iBay St okanye iHampton St.
Uza kufumana yonke into oyifunayo kule flethi okanye indlu ekwicomplex ekhuselekileyo netofotofo.
IGUMBI LOKULALA eliphambili: IGUMBI LOKULALA
eliphambili linebhedi enkulu etofotofo enamashiti asemgangathweni ehotele kunye neetawuli ezicocekileyo, ezicocwe kakuhle qho emva kokuhlala. Iigawuni ezakhiwe kwiiwodrophu zineeshelfu nendawo eyaneleyo yokugcina imithwalo yakho. Igumbi lokulala line-TV engasetyenziswayo. Yonwabela ubumnandi kwibhalkhoni yakho!
Yithi zava esofeni phambi kwesikrini esikhulu seTV. Isikhokelo sethu seendwendwe esikwi-intanethi (esinezinto eziluncedo malunga nendlu kunye namacebiso ngeendawo ezimangalisayo ezikufutshane) siyafumaneka ukuze sikuncede wenze ukuhlala kwakho kube yinto engalibalekiyo!
Phola phandle uze uyikhuphe yonke kwibhalkoni ekwaziyo ukufumaneka kwigumbi lokuphumla!
Ikhitshi elinento yonke liza neoveni, umatshini wokuhlamba izitya, umphezulu wokupheka, izinto zokupheka, izixhobo zombane, ifriji nefriji nezinye izinto ezisisiseko zokupheka.
Indawo YOKUPAKA IMOTO: Indawo yokupaka iyafumaneka kwindawo ekhuselekileyo YEMOTO
IGUMBI LOKUHLAMBELA: IGUMBI LOKUHLAMBELA
lalamaxesha lineshawa enobukhulu obukumgangatho ophezulu, isepha, ishampu ne-conditioner, kunye nomatshini wokomisa iinwele.
INDAWO YOKUHLAMBA IMPAHLA: INDAWO YOKUHLAMBA IMPAHLA
yaseYurophu inomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla.
I-INTANETHI / I-WIFI: I-WIFI
yasimahla ayinamda iyafumaneka kwindawo oza kuhlala kuyo.
Sikunika ipakethi yokuqalisa yezinto ezibalulekileyo zendlu njengezinto zokuthambisa, isepha yokuhlamba izitya, iphenyane lokuhlamba izitya, amalaphu okuhlamba izitya, isiponji sokukhuhla, ishampu, i-conditioner nephepha langasese xa ubhalisela ukufika. Emva koko kuza kufuneka uthenge zonke izinto ezifunekayo ukuze uqhubeke nokuhlala kwakho.
Ibhedi eyisofa iqukiwe xa ubhukisha iindwendwe eziyi-3 nangaphezulu. Ukuba ufuna ukusetyenziswa kwesofa ekwayibhedi eneendwendwe ezingaphantsi kweziyi-3, kuza kusebenza imali yebhedi eyisofa. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze ubuze.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ilawulwa ngokuziqhenya Ngumbuki Zindwendwe Olungiseleleyo
Umbuki zindwendwe ngu- Ready Set Host
Sibonelela ngesikhokelo esiluncedo kwiindwendwe kwi-Intanethi xa ubhukisha indawo yethu - oku kuphendula imibuzo ebuzwa rhoqo.
Siqhagamsheleka ngokupheleleyo phambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho, ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Ngaphandle koko, siya kuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye sikushiye uyonwabele!
Siqhagamsheleka ngokupheleleyo phambi, nge…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sandringham